သင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား (2010) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
“ သင်ပိုခြစ်လေလေသင်ယားယံလေလေ” သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။ ပြောင်းပြန်မှန်ပါသလား စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက“ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်လိင်ဆန္ဒကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း” ကိုတရုတ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည်။ ယနေ့အမျိုးသားများလည်းပါ ၀ င်သည်။
အော်ဂဇင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခါတလေကျွန် horn တော်ဟာပိုပြီးခွန်အားကြီးတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်လည်းစွဲဆောင်မှုရှိသည် (ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါ) ။တွမ်
ကျွန်မရဲ့ရည်းစားအသစ်နဲ့ကျွန်မတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြတ်သွားတယ်၊ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ (သုံးလအကြာညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့ပြီး) နောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြန်ကြည့်ရှုရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုများကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုးရွားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကြောင့်၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေပုံရသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ငါကပိုပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးမနေ့ကအိမ်လုပ်ထားတဲ့အရုပ်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ စကားမစပ်, ငါ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေ * လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိတာအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်လှုံ့ဆော်ခြင်းကသာကျွန်ုပ်အားဤတပ်မက်မှုများမှခေတ္တသက်သာခွင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း၊ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်စရာအတွေးဖြစ်သည်။ Geeze, တကယ်ကိုအက်ကြောင်းနှင့်တူ, ya know? -ဒစ်ခ်
ဒီမကြာသေးမီ set ကိုအတွင်းပထမဆုံးအော်ဂဇင်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏မယားကိုရန်အလွန်နီးကပ်သလိုခံစားရတယ်, ငါကနဦး satiated ခံစားရတယ်။ နှစ်ခုထက်ပိုသော orgasm ပြီးနောက်, ငါတစ်နာရီကိုလာမည့်တဖြစ်ကောင်းသုံးကြိမ်ရနိုင်သည့်အခါစဉ်းစားလာတယ်။ ထိုအခါငါတယောက်တည်းတဦးတည်းအော်ဂဇင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အကြံအစည်၏ကြိမ်နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ဆ။ ယခုငါအဘို့အကြည့်ဖို့အဘယ်အရာကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နီးပါးရယ်စရာပါပဲ။ ဒါဟာအော်ဂဇင်မြင့်မားအကြိမ်ရေတစ် utilitarian ရှုထောင့်ကနေနှစ်လိုဖွယ်မရှိ, တစ်ဦးနှောင့်အယှက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင်းအတော်လေးရှင်းပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ငါ porn မှပြန်လာသောသို့မဟုတ်မပါဘဲ masturbated ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီဥပမာအားဖြင့်ငါ sex.- စဉ်အတွင်းတစ်အော်ဂဇင်ခဲ့သောနေ့ရက်ကာလကိုအပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟယ်ရီ
ငါအော်ဂဇင်ကိုသင် hornier စေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn အပေါ် binging ပြီးနောက်, သင်အမှန်တကယ်ပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ်ရဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ပထမဦးဆုံးအသုံးရက် difficult.- များမှာမက်စ်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အထိ၊ ငါသုတ်ရည်မပါဘဲလေးပတ်လောက်သွားခဲ့ပြီ၊ တ ဦး တည်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းငါအလွန်အကျွံ horny နှင့် porn အားဖြင့်သွေးဆောင်ခံစားရတယ်။ လေးပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်မကြုံခဲ့ရဘူး။ ယခုငါတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုပေးဆပ်ရတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်မရဲ့လမ်းကိုပြန်လာဖို့သေချာပေါက်ကူညီလိမ့်မယ် ။— \_ tအလန်
ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအပြီးမှာငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုမရခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ ကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်။ ငါရည်းစားနဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်၊ မိန်းကလေး ၄ ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။ ငါလူပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၊ ယုံကြည်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်အလွန်များပြားသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရသော်လည်းသူမသည်ဇန်နဝါရီလကသူ၏တိုင်းပြည်သို့ပြန်ခဲ့ရသည်။ သူမထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ခံစားချက်တွေဟာပြန်လည်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ငါတစ်နေ့လျှင် ၂/၃ ကြိမ်ရိုက်ယူပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့သည် (၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်မလုပ်ခဲ့သောအရာ) တွန်းအားများလျော့နည်းခြင်း၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်မထွက်သွား၊ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနည်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါအခြားမိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်…စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဟုဆိုပါစို့။ ငါအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့အခုတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်၊ ငါ ၅ ရက်နေပြီးပြန်လာပြီ။ ငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ကလိင်ဆက်ဆံတာ၊ ဒါကိုကျော်နိုင်ရင်ကိတ်မုန့်ပဲ။ ဒါပေမယ့်လိင်ပြီးနောက်တပ်မက် ... sh * t ကို,f* ck ။ ငါအရမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးတွေအများကြီးလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ fapping ကတားဖို့ခက်တယ်။ ဒါကြောင့်သတိထားပါ ပြန်မနေပါနဲ့ တကယ်လို့မင်းဟာ fapping လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးစစ်မှန်သောလိင်ကိုရှာဖွေရန်သင်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ။ Fapping ကမထိုက်တန်ဘူး။Ralf
ပညာရှင်၏အဆိုအရဒေါက်ဂလပ် Wile (အဆိုပါ Bedchamber ၏အနုပညာ), ရှေးခေတ်တရုတ် Daoists ကခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်ကိုကုန်ခမ်းစေသော်လည်း orgasm သည်လိင်အင်္ဂါအလိုဆန္ဒကို (ထိုခန္ဓာကိုယ်မှမွေးဖွားပြီးနောက်ချက်ချင်းသက်သာပြီးနောက်) သွေးဆောင်နိုင်သည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်အရေးကြီးကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။
သူတို့၏ ဒီ conundrum မှဖြေရှင်းချက် ရံဖန်ရံခါသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အတူမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံလေ့သုတ်ရည်လွှတ်အတူရံဖန်ရံခါလိင်ထက်လျော့နည်းကွယ်ပျောက်သွားခဲ့သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ၎င်းတို့၏အမြင်တွင်အနည်းငယ်မျှသာအော်ဂဇင်နှင့်အတူလိင်အများကြီးအမှန်တကယ်မြေတပြင်လုံး-ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့ချစ်သူများမွေးမြူ Ching (တက်ကြွ) နှင့်ယောက်ျား "တပ်မက်အတွေးများ" ၏စိတ်သက်သာရာရ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို“ အသုံးမပြုဘဲအသုံးမပြုဘဲ” ဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းမှုသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေပြီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း၊ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်မငြိမ်မသက်ခြင်း၊
ah, အမျိုးသမီး။ သူတို့ကစံချိန်တင်မြင့်တက်မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့ပိုပြီး frequent. -Friedrich နစ်ရှေးစေ
ဤအလေ့လာသူများညာဘက်ရှိသနည်း နည်းပါးလာစံချိန်တင်မြင့်တက်နည်းပါးလာစိတ်ဓာတ်နှင့်ယေဘုယျပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစျနိုငျသလဲ အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ“ ချုပ်တည်းခြင်းမရှိဘဲအသုံးချခြင်း” ပြီးနောက်သင်ယူမှုဟန်ချက်သည်ပွင့်လင်းသောစိတ်၊ စိတ်ရှည်မှုနှင့်ဟာသဉာဏ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ရည်းစားဟောင်း၏အစီရင်ခံစာများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကျနော်တို့အကြောင်းကိုတစ်လအဘို့ဤအယူအဆနှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏ scorecard:
•သုတ်ရည်မပါသော“ ကုန်းပြင်မြင့်” သုံးမျိုး
•ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မ reacquainted နေကြတယ်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် (ပထမအပတ်၌တစ်ချိန်ကကျွန်တော်“ ကြည့်” ခဲ့သည်) ။ ငါဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကိုသတိမပြုမိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနေတာပါ။ ပထမအပတ်မှာ၊ ငါသုတ်ရည်သုံးကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး“ တက်ဖို့” မလုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာပါပြီ။ ငါ cum ရန်တိုက်တွန်းခံစားခဲ့ရလျှင်, ငါပဲဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်သွားကြကုန်အံ့။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ငါတကယ်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှနှင့်တူပုံရသည်ရှည်လျားနှေးနှေးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားနေပါတယ်။ ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အော်ဂဇင်တစ်ခုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သူနှစ် ဦး (အားလုံးသည်သုတ်ရည်လွှတ်မရှိသော) ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သို့သော်မကြာခဏအော်ဂဇင်ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည်ကြာရှည်မခံသောကာလမှထွက်လာပြီးပြန်လည်နုပျိုလာသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့တစ်နေ့လုံးနီးပါးနေခဲ့ကြတာပါ။
ဦး ဆုံး၊ ငါဟာသီတင်းပတ်ခြောက်ပတ်နီးပါးလောက်အော်ဂဇင်မရှိဘဲသွားနိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာငါဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ထိုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်နွေးထွေးစွာဆက်ဆံခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ပြီးခဲ့သည့်လကသို့မဟုတ်ဒီတော့ငါလိင် (ပုံမှန် 1-2 ရက်သတ္တပတ် / တစ်ပတ်) အတွင်းပုံမှန်အတိုင်းအော်ဂဇင်ကြိမ်နှုန်းပြန်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ငါ့ခံစားချက်တည်ငြိမ်လျော့နည်းလာပါပြီ။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးတွန်းအားပေးနှင့်ပွတ်တိုက်အားပါဝငျပါ။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကအမှန်တကယ်ပင်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရပြီးအော်ဂဇင်ကိုပင်မရိပ်မိသော်လည်းပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်မထွက်ရန်မတတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်ကြိမ်နှုန်းကို (၆.၇၆ / တစ်ရက်) ပျမ်းမျှအားလေးပုံတစ်ပုံခန့်လျှော့ချလိုက်သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ quell နိုင်ဘူးခဲ့သောအော်ဂဇင်မှအတင်းအကျပ်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည် ငါ့ဇနီးကသူမရဲ့အော်ဂဇင်ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားတာကိုနားလည်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ချစ်ကြတဲ့အခါသူကငါ့ကိုအော်ဂဇင်လုပ်ဖို့တက်ကြွစွာကြိုးစားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်အပြုအမူကိုဇနီးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုနီးကပ်စေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ မကြာခဏအော်ဂဇင်သည်ဆက်ဆံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကော်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အော်ဂဇင်သည်ချစ်သူများကိုပိုမိုနီးကပ်စေသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အထူးစိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုမှာသူမသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် (နှင့်စုစုပေါင်းအော်ဂဇင်နည်းပါးသည်) တွင်အော်ဂဇင်ရှိပြီးမကြာခဏအော်ဂဇင်နည်းခြင်း၏ဆက်ဆံရေးကိုတိုးပွားစေသည်။ ငါနှင့်မတူဘဲသူသည်လိင်မကျေနပ်မှုကိုမည်သည့်အခါကမျှမတိုင်ကြားခဲ့ဖူး၊ တိုက်ပွဲများလည်းမရှိသလောက်နည်းပါးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လည်းများစွာကျေနပ်အားရသည်။
ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကအရင်ကထက်ကောင်းတယ်။ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုများလာပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိသည်။ ငါကပိုပျော်တယ်၊ ငါ့ဇနီးနဲ့ပိုရင်းနှီးလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအချို့သည်အခြားသူများထက်လိင်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲရန်ရိုးရှင်းစွာယုံကြည်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ ခွေးကောင်များ” ဖြစ်လာနိုင်သည်။ Karezza [အော်ဂဇင်၏ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲချစ်ခင်လိင်] ကယ်ဆယ်ရေးမှ! Karezza သည် ADHD ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်သဘာဝ ritalin နှင့်တူသည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အသက်ကယ်သမားပဲ။
(အဘယ်သူသည်လုံးဝ reboot လုပ်ပြီးပြီ) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကတကယ့်ကိုတကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ငါအော်ဂဇင်မရသည့်ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါပထမနှစ်ပတ်၊ အထူးသဖြင့်ရက် ၄ နှင့် ၇ ရက်နှင့် ၁၀ - ၁၂ တို့တွင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုနောက်မှစိတ်တွင်ပြောင်းကုန်ပြီ။ ဒါကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံပါ လောလောဆယ်ငါနောက်ဆုံး M / O ကနေနေ့4ရက်နေ့တွင်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်လိင်နှင့် MO ကိုပိုလိုချင်သည်။
ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပြန် bounce ဖို့ကျွန်မခင်ပွန်းလအတွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်ကတစ်လမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ orgasm ကန့်သတ်, ကြှနျုပျတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်သစ်အပြည့်အဝစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်နှင့်ကျွန်တော်မှာအားလုံးစိတ်ပျက်မရှိကြပေ။ ဒါဟာသော်လည်းဗဟိုပြုနေဖို့မကြာခဏချစ်ခင်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် arousal (အော်ဂဇင်၏တိုတောင်းသော) လိုအပ်ပါဘူး။
ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာကဤအတွေ့အကြုံများအပေါ်မည်သည့်အလင်းကိုသွန်းနိုင်သလား? ဖြစ်နိုင်အောင်။ တကယ်တော့ Daoists တွေဟာ ဦး နှောက်ရဲ့သော့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောနှိုးဆွခြင်း (ယနေ့အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ပေးသောလိင်အကူအညီများသာမကဘဲအော်ဂဇင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလုံလုံလောက်လောက်နှိုးဆွခြင်းပင်) သည်အခြားပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေရန် ဦး နှောက်ကိုအချက်ပြနိုင်သည်။
ဒါက "နှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်မူးရူးခလုတ်"အယူအဆ: ဦး နှောက်သည်ပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ (အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်ပြမှုပုံစံ) သည်၎င်းကို ပိုမို၍ လိုက်စားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းနိုင်ရန်ယာယီအားစိုက်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ Daoists များကအထွတ်အထိပ်အလွန်အကျွံသည် ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေပြီး၎င်းသည်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ လျှော့ချ D2 (dopamine) receptors ဦး နှောက်ရဲ့ striatum ၌တည်၏။
မည်သို့ပင်တိကျသောယန္တရား (s), ရလဒ်အစားပြင်းထန်သောလိင်စိတ်နိုးထပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်မှု feeling ၏, ငါတို့မကြာမီ hungrily နောက်ထပ်ဆွဘို့အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့, အဆိုပါ Chaser ချိတ်-တက်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်, အသန်စွမ်း။ ဒါကြောင့်အဘို့အဆင်သင့်ရှိပါစေ။ ဒီအကောင်လေးသူ့ကိုယ်သူအဘို့ဤကြုံတွေ့:
အဆိုပါချိတ်ဆက်အံ့သြစရာပဲ! ဒီဘရာဇီးကြက်နှင့်အတူ လှသောအဆင်း! ကျနော်တို့ရေချိုးခန်းထဲမှာအိမ်သူအိမ်သားပါတီမှာချိတ်ဆက်။ ငါပထမအကျော့ပြီးနောက်ပိုပြီးလိုချင်ပေမယ့်သူမသူမ၏ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုးခန်းအတွင်း၌အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးလူများသည်တံခါးကိုလာခေါက်။ သံသယဝင်လာကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းထိပ်တွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ငါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌ ပြန်၍ ရေးသားခြင်း၊ အရမ်းဆိုးတယ် ငါပြန်လွတ်လာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ငါချောက်ထဲကနေခုန်ထွက်လာတယ်! ငါ၌နောက်တဖန် porn ပြန်ကြည့်ဖို့အလွန်သေးငယ်တဲ့တွန်းအားပေးခဲ့ပေမယ့်ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ခဲ့နိုင်ဘူး။ ဝိုင် အနည်းဆုံးငါအဲဒီစွဲကျော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိ! ယခုမူကားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကြာခဏပြန်ဖြစ်သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ထပ်မံမြင့်တက်နေကြောင်းသတိပြုမိလာသည်။ ငါ့ရဲ့စူပါရဲရင့်မှုကိုငါလွမ်းတယ်!
အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်တဲ့အရှိန်မကျေနပ်မှုများပြေးစက်နှင့်စိတ်ဓာတ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုဆိုးသေး, ကတကယ်တော့, သူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုကိုအောင်မြင်စွာပိုပြီးဆွနှင့်အတူကျော်လွှားမရနိုငျသောသိမ်မွေ့ဦးနှောက်ဓာတုအပြောင်းအလဲများကို၏ထုတ်ကုန်အခါ, မိတ်ဆွေတို့ကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံမတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဆနျ့ကငျြ, အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့မကြာခဏချစ်ခြင်းမေတ္တာစေသူကိုချစ်သူများ, ပြင်းထန်သော arousal နဲ့အော်ဂဇင်ရဲ့ neurochemical ပေါက်ကွဲမှုမရှိဘဲမကြာခဏ, ဒီမူးရူးခလုတ်အတိတ်ညာဘက် tiptoe လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ရငျးနှီး၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသီးအနှံကိုရိတ်ရ, သူတို့ရဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား rosy အမြင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများ၏နှင့်ထို့ထက် ပို. ပြင်းထန်သောဆွဘို့အနှောင့်အယှက်မတရားသောရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဆိုပါ Daoists မှတ်တမ်းတင်ထားသောသကဲ့သို့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောက်ျားတွေ reboot အဖြစ်တစ်ဦးထှတျအထိပျပွီးနောကျ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုကိုမကြာခဏသိသိသာသာ abates ။ သငျသညျယခုပြန်သွားကြသည်တဲ့အခါမှာသင့်ဦးနှောက်ပြန်လည်ချိန်ညှိသည်အတိုင်းသင်၌အားကြီးသော Chaser ခံစားရရင်တောင်သူကအမြဲကြောင်းလမ်းမဖွစျနိုငျသညျ။
ဦး နှောက်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ“ ပိတ်ထား” စေပြီး Chaser ကိုလူတစ် ဦး ၏လိင်စိတ်နိုးထစေမှုယန္တရားများကိုကျော်လွှားရန်လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်ရှင်းပြရန်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံပညာအတွက် \_ t မြင် အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ် Hangover စေပါသလား?
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုသင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား (2010)"
04 မှာ 24 / 2011 / 2: 43 နံနက်
ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ 'chaser effect' ၏အတွေ့အကြုံ
ကျွန်မတော်တော်လေးကောင်းသော feeling (ဒီတနင်္လာနေ့ပါပြီမယ်လို့) နှစ်ပတ်အတွင်းချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအချို့အပျက်သဘောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခြင်းခံခဲ့ရနေစဉ်, နက်ရှိုင်းစွာအိပ်ပျော်နေသောယားယံခြင်း, ထူးဆန်းအိပ်မက်နှင့်ဒုက္ခကဲ့သို့ငါသည်လည်းရှောင်အချို့အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိထားမိမှစတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုမြင့်တက်ခဲ့ကျွန်မရဲ့မျက်နှာနှင့်အသားအရေဤမျှလောက်ပိုပြီးတောက်ပနှင့်အသက်ရှင်လျက်ကြည့်ရှု, ငါပိုပြီးသရုပ်ြပများနှင့်အသကျရှငျခံစားခဲ့ရအများစုရက်ပေါင်းလူမှုရေးအခြေအနေများပိုမိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်, ငါအဘို့ထိုသူတို့ရှိခြင်းမဟုတ်ပြီးနောက်နောက်တဖန်နံနက်စိုက်ထူရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့သည် အချိန်အကြာကြီး။ အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လူဦးကတိုကျတှနျးငါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့, အခမဲ့ဖြစ်သလိုပဲရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါလှည့်ပတ်ပတ်လည်အလှည့်ကိုတွေ့မြင်စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော့်ကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာမှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်အဖြစ်စွဲမက်စေခဲ့တယ်။ ငါဟာ pmo နဲ့ဝေးကွာဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုတွေဆက်မလုပ်ရဘူး။ ငါစိတ်အလိုမကျသောမိန်းကလေးများနှင့်အမှန်တကယ်စကားမပြောသောစိတ်ပျက်စရာညဥ့်နက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီးအလွန်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းချက်များကိုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်များသောအားဖြင့်ပြုလေ့ရှိသောအမာခံပစ္စည်းများမဟုတ်ပါ၊ \_ t ဒါပေမယ့် softcore Skinemax ပစ္စည်းပစ္စယ။ လုံးဝရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ကမူးနေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးလည်းထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။ ရုပ်သံလိုင်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပြန်လှည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာငါတကယ်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်။
ငါမကောင်းတဲ့ခံစားမှုနိုးလာပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မနှိမ့်ချခဲ့ဘူး ငါပြန်စနိုင်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးကျန်းမာသောညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကြိမ်ကြည့်ခြင်း (ကျွန်ုပ်အပြည့်အ ၀ စွဲစွဲလမ်းနေခဲ့ချိန်၌ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကောင်းသော်လည်း၊ ကျန်းမာသောညစ်ညမ်းသောပုံများရှိပါသလား) သည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုလိုချင်သည်ကိုနိုးလာခဲ့သည်။ ငါစတင်ကတည်းကငါ၌အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်တွန်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ရဲ့ယုတ္တိဗေဒကအော်ဟစ်နေပေမယ့်ငါ pmo ကိုသုံးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ ထို့နောက်ငါရှက်ကြောက်မိပြီးယုတ္တိနည်းအရရွံရှာနေသောအရာများဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာများကိုပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဤအခြေအနေသို့ရောက်စေခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စွဲနေသည့် ဦး နှောက်သည်အဝေးမှမသွားနိုင်ပါ။ ငါ blocker သွားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါညစ်ညမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်ကပတ်ပတ်လည်လမ်းတစ်လမ်းရှာခဲ့တယ်။
05 မှာ 25 / 2011 / 7: 10 ညနေ
ဒီမှာ porn-non-user အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ:
ငါခဏတာမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြhadနာရှိခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်တချိန်လုံးလုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပြီးရပ်တန့်ဖို့အရမ်းခက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတတိယအကြိမ်ဆေးကြောခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ (တစ်ခုစီသည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ ) ငါထင်တာကတော့ဒီအချိန်ဟာငါပထမဆုံး chaser effect နဲ့မရုန်းကန်ခဲ့ဘူး။ သင့် ဦး နှောက်ကသူ့ဟာသူထွက်မလာခင်အထိသင်ခဏရှောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ပြီး၎င်းနောက်သင့်အနေဖြင့်ကျန်းမာစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်။ ငါထင်သည်နှစ်ပတ်တာကောင်းတယ်နိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးဖြစ်တယ်။ ငါအရှုံးမပေးခင်ပထမဆုံးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊
07 မှာ 08 / 2011 / 5: 06 ညနေ
ဒီလူရဲ့ post ကိုပြသထားတယ်
အဆိုပါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်မှအလုပ်မှာကြောင်း neurochemical သံသရာမျိုး။ ကောင်းသောခံစားချက်များ ထပ်မံ၍ ရရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် (ချို့ယွင်းနေသော) နေ့ရက်များ (လူအချို့ကပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုများကြောင့်သာခံစားရခြင်း) သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုနောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့မည်သို့ဆွဲဆောင်မည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများအဖို့ပြtimeနာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစိတ်ဓာတ်များပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးအမြင့်ဆုံးများကပိုမြန်လာသည်။
ငါ masturbate အဆိုပါနေ့နှင့်ကြီးစွာသောစွမ်းအင်စာရေးအလွန်အကောင်းမြင်ကြသည်ပြီးနောက်တစ်ရက်: ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်ပုံစံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ 2-3 ရက်ပေါင်းနောက်မှကြောက်မက်ဘွယ်သောနေသောခေါင်းစဉ်: အချိန်များတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, မောပန်းခြင်း, ပျင်းရိခြင်း, ပျော့စိတ်ကျရောဂါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ် (ဤအရာသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းပျက်ကွက်ခဲ့သော) ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်ခံယူပါကကျွန်ုပ်သည်“ ပုံမှန်” ခံစားချက်ဖြင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ မယုံမကြည်ဖြစ်သော်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျပါ။ တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောခြားနားချက်မှာကာယလှုပ်ရှားမှုများအတွက်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကအဓိပ္ပါယ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
07 မှာ 08 / 2011 / 9: 21 ညနေ
ငါ pm တွင်ထံမှ abstst ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကတည်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော့်ယောက္ခမနှင့်အစ်မဖြစ်သူသည်ခဏတာလည်ပတ်လာခဲ့ရာ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြactနာများကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ဇနီးလိုချင်တာကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘူးဆိုတာအခုတော့သတိထားမိပါပြီ။ ၎င်းသည်သူမအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်ပုံရသည်၊ ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်နဲ့မယှဉ်ပြိုင်ရလို့လည်းသူမအရမ်းပျော်တယ်။ သို့သော်အိမ်ထဲရှိလူများနှင့်ပေါင်းသင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
လူတိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ဒီတနင်္ဂနွေကပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ 🙂သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုစတင်ခံစားနေပြီ။ အချို့သူများသတိပြုမိကြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏အသံသည်ပိုမိုသောအသံ၊ ငါပိုကောင်းတယ်။ ငါဟာငါ့ရဲ့အလုပ်ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူး။
07 မှာ 20 / 2011 / 4: 11 နံနက်
“ ပြန်လာပြီးနောက်နှစ်ရက်ကအရမ်းခက်တယ်။ အထူးသဖြင့်မွန်းလွဲပိုင်းမှာအာရုံစူးစိုက်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကတကယ်နှေးကွေးပြီးထုံနေသလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စကားလုံးများမှာမှုန်ဝါးနေပြီးအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်တွန်းအားသည်ယခင်ကထက်များစွာပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့သည်။ ဤသည်ရက်သတ္တပတ်ပြန်ဆုတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခက်ခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ porn / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲနေတုန်းစိတ်ဓာတ်အပြင်းအထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေါသပြင်းထန်ပြီးစိတ်နာကြည်းနေတတ်တယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤကာလများသည်ကြိမ်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါပြန်ပြောင်းသွားသောကြောင့်စိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများကြုံခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ဒေါသနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတာကိုတစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်ထဲမှာသံသရာတစ်ခေါက်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တာထက်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ ဒါ့အပြင်ကာလဟာတိုတောင်းပေမယ့်ပိုမိုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်၊ ငါဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခံစားနေရသလိုပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ငါဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ”
08 မှာ 05 / 2011 / 5: 51 ညနေ
အချို့အတွက်“ chasers” ကိုဖြစ်စေသည် (သို့သော်အခြားသူများမဟုတ်ပါ) ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုဒီမှာတွေ့မယ်။
ဒါကြောင့်မနေ့ကငါ porn ဖြတ်ပြီးကတည်းကငါ့ဒုတိယစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ ကျွန်တော်အိပ်မပျော်မီ (မိန်းကလေး) အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေသည်ဟုစဉ်းစားခြင်းကမည်မျှသင့်လျော်သနည်း။ ငါ porn flashbacks အကြောင်းကိုသာစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်နိုင်သည့်အခါကမတိုင်မီတိုးတက်မှုရဲ့ပုံပါဘဲ။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်တော်တစ်နေ့လုံးဟိန်းသံတိုးများလာသည်။ ငါတစ်နေ့လုံးလုံးယိုစိမ့်ပြီးငြီးငွေ့လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ရမည်။
01 မှာ 01 / 2012 / 6: 51 ညနေ
ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ porn free တစ်လကျော်သုံးပြီးပြန်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါကငါ့ဘဝကိုအများကြီးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒီမှာအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်ရှိတယ်။
ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့အခု ၂ ပတ်လောက်ကြာနေပြီ။ 2st Date - ပျော်စရာကောင်းတယ်၊ တစ်ညလုံးစကားပြောပြီးဘားမှာကခုန်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယနေ့စွဲ - ဘိုးလင်းသွားတယ်၊ ပြီးတော့သောက်ဖို့ထွက်လာတယ်၊ တစ်ညလုံးစကားပြောပြီးပျော်ခဲ့တယ်။ တတိယနေ့ - ညစာစားပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်တစ်ကားအလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးအတူတူထိုင်။ အံ့သြသွားသည်။ ငါခဏ၌ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များတစ်ခု ... ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြန်ဖွင့်ပြီးသုံးနာရီအကြာ…။ မနေ့က 1th နေ့ - နေ့လည်စာနှင့်ပြတိုက်သို့သွားခဲ့သည်, ငါသူမ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်ခဲ့သည်တနေ့လုံး။ သူမရဲ့သွားဟာအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲအဝလွန်နေတယ်၊ သူမနှင့်လက်များကိုဆုပ်ကိုင်ထားရခြင်းကကျွန်ုပ်အားအတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သူမအနားကိုတကယ်မသွားချင်ပါ။ ငါပြသနိုင်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သူမလျောက်ပတ်သောအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်ထင်ပေမယ့်ငါ့အဘို့ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမနဲ့ဝေးသွားချင်ခဲ့တယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ညတုန်းကငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ငါဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဒီမိန်းကလေးကိုငါဘာလို့မကြိုက်တာလဲ ငါရည်းစားထားမလား။ အဘယ်ကြောင့်ငါသူ့ကိုနောက်တဖန်ဆွဲဆောင်မဟုတ်လော ငါဘယ်သူ့ကိုမှကြိုက်မှာလား။ နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ခြင်းကဒါကိုအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲ့တာနောက်မှ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဖြစ်မှန်များကိုကြည့်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထွက်ပေါ်လာတာလဲ၊ ဘယ်ရက်ကမကောင်းခဲ့တာလဲ။ PMO အစည်းအဝေးအပြီးတွင်နောက်တစ်ခု…၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
ဒါကြောင့်ငါကဖျက်ဆီးခဲ့ကြပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားရက်စွဲတစ်ခုရတယ်။ ကျနော်တို့တနင်္လာနေ့အတူတူလာပြီ။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အနည်းငယ်မျှတမှုရှိသင့်ပြီး၎င်းကိုနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ဒီပစ္စည်းပစ္စယနောက်တဖန်မထိဖို့မက်လုံးပေးတစ်ခုငရဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
01 မှာ 22 / 2012 / 9: 23 ညနေ
အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ပုံမှန် neurochemical သံသရာတစ်ခုအစွန်းရောက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ဥစ္စာဆိုတာကိုသိရတာကောင်းတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကမကြာခဏအော်ဂဇင်ပြုဖို့သွေးဆောင်ခံရနိုင်တယ် ... ပြီးတော့သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအချိန်တော်တော်များများကစိတ်ပျက်စရာမကောင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏ပြောကြားချက်။
ကြာသပတေးနေ့၊ အလုပ်ကနေထွက်သွားတော့ကျွန်မတို့ရှေ့မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မိန်းကလေး ၅ ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိပြီးကျွန်မနဲ့ကျွန်မသူငယ်ချင်းကအဲဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူက "ကြာသပတေးနေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု" ။ သူ၏ gf သည် Gothenburg တွင်နေထိုင်သည်။
သူကတနင်္လာနေ့နံနက်ကသူသည်မက်ထရိုတွင်မည်သည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးမျှမတွေ့ရကြောင်း၊ အင်္ဂါနေ့တွင်အနည်းငယ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အနည်းငယ်တွေ့ရကြောင်း၊ ကြာသပတေးနေ့တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောမိန်းကလေးများနှင့်ပြည့်နှက်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အိုကေသူမှာအပတ်စဉ်သံသရာရှိတယ်။ ငါ့ဥစ္စာကဘာလဲ? :-)
02 မှာ 15 / 2012 / 6: 15 နံနက်
၆ ရက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ဒါဟာမိုက်မဲ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခု ၁ ရက်အကြာမှာကျွန်မလိင်တံလုံးဝသေသွားရင်တောင် PMO ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းချင်တယ်။ အခုကျွန်မစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာတကယ်နားလည်လာပြီ။ ဒါဟာ PMO လိုအပ်လိင်တံမဟုတ်ပါဘူး ... လမ်းမရှိ။ ဒါဟာ ဦး နှောက်ပါ။ ဒါဟာသူကပြောတယ် dopamine လိုသည်။
1 ။ အလွန်ဆိုးရွားတုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ။ အကြှနျုပျ၏လည်ချောင်းအရူးနဲ့တူခဲ။
2 ။ အလွန်ပင်ပန်း။
၃ ။ အရာအားလုံးကိုအမည်းရောင်ကြည့်တယ် ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးနေ့လိုပါပဲ။
4 ။ ကြောက်လန့်, စိုးရိမျ။
5 ။ ငါ့စကားသံကိုတက် fvcked ဖြစ်ပါတယ်
6 ။ ငိုက်သော
7 ။ အရင်ကခံစားချက်မျိုးအတွေ့အကြုံများ၏စုံတွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ပဲထူးဆန်း
၈ ။ သူတို့ကိုငါ့ ဦး ခေါင်းထဲကမထုတ်နိုင်ဘူး
10 ။ စနစ်တကျ။
05 မှာ 15 / 2012 / 11: 26 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၅၂ ရက်ကပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ငါရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲသည်အထိငါ့အမိန်းကလေးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, ငါ PMO မှကြီးမားသောတွန်းအားပေးလိမ့်မယ် (တကယ်တော့ဘယ်တော့မှဖူး) ငါတကယ်ကောင်းသောအတွက်ဆွဲထားခဲ့ကြသည်။ ပထမအကြိမ်မှာ ၂ ပတ် ၁ ပတ် ၂ ပတ်အကြာ၊ ပုံအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပြီးသတိလစ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘောင်းဘီပေါ်သို့ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ အဲဒါဟာမှော်ဆန်သလိုပါပဲ၊ ၁၀ စက္ကန့်လောက်စာကြည့်ပြီးပြီ။ ဒါကမွန်းလွဲပိုင်းမှာ၊ ငါ့ကောင်မလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ပတ်အကြာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံအနည်းငယ်ကိုသာကြည့်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမထိခြင်းမှတားဆီးခဲ့ပြီး MO ကိုပိုမိုပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုများမပြုလုပ်မီပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်လိုက်သည်။ အခုဒီမနက်မှာငါမိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကပဲ PMO ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမျှမကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒအလုံအလောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပုံအချို့ကိုစတင်ကြည့်ရှု။ “ ပြီးရင်ကောင်းကောင်းရနိုင်မည်” ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသည်။
ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုနှင့်လူမှုရေးဘ ၀ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဤအမှားနည်းနည်းနှင့်လိုက်ဖက်သောကျွန်ုပ်သည် Reboot ကိုဖြုန်းတီးနေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဤဆန္ဒများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောဤ hickup များအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာရှိပါကကျွန်ုပ်သည် (နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ပြီး MO'ing လုပ်မည့်အချိန်) ကျွန်ုပ်မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမျှမကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ခြားနားချက်မှာပုံအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်၌ဖြစ်သည်။ ၅ မိနစ်ထက်မပိုသောကျွန်ုပ်သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာအော်ဂဇင်နှင့်အရာရာအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒီကိစ္စကတကယ်တော့ဒီညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အထကိုငါလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့စွဲလမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်ဟာတစ်ခါတစ်ရံအရမ်းပြင်းလွန်းတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြတ်သန်းနေသည့်တစ်ခုတည်းသောသူမဟုတ်ကြောင်းသိရ။ ဝမ်းသာပါသည်။ ငါဒီအိတ်အလေ့အထကိုအဆုံးသတ်ငါ့ဆန္ဒဖြည့်ဆည်း tio ဘယ်သူမှထံမှဤအချိန်ငါ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
07 မှာ 19 / 2012 / 3: 16 ညနေ
yeah, ငါ့အတွေ့အကြုံအတွက်ငါ့အအားနည်းဆုံးအချိန်ငါဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် 18 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဂဇင်မှပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ငါ porn ကိုကြည့်ရှုရန်အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်တွန်းသည်။ တစ်ခုခုလွှတ်ပေးခဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ငါတကယ်သတိထားရမယ် LINK -
07 မှာ 25 / 2012 / 5: 01 နံနက်
တစ်ဦး redditor ထံမှ
ငါအောင်မြင်စွာ 07 / 03 နှင့် 07 / 13 အကြား fapping ရပ်တန့်, ငါလူတဖြစ်လာခဲ့ပါသည်တူသောဤအ 10 ရက်ပေါင်းကာလအတွင်းကျွန်မခံစားခဲ့ရ (testosterone ဟော်မုန်းထပ်တိုးဒါမဟုတ်ဘူးလား?) ဒါပေမယ့် 07/14 မှာငါခံစားခဲ့ရတယ် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု ငါ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, ငါ့ချက်ချင်းငါ့အ nofap စွန့်စားမှုတော့ဘူး။ ငါ gf နဲ့လိင်ဆက်ဆံနေတုန်းပဲ၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့အချိန်ကောင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါသတိထားပါလိမ့်မယ် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု.
08 မှာ 21 / 2012 / 9: 46 ညနေ
ရက်ပေါင်း ၉၀ တိုင်ကြားမှု - ပိုဖျက်ရန်မလို
အဆိုပါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအတိတ်၏အရာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်နှင့်နောက်တဖန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစတင်ရန်တိုက်တွန်းအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူ Oed, ငါ porn ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး။
ငါလိင်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်သောအခါ၎င်းသည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လူသိရှင်ကြားထွက်သွားတုန်းကအမျိုးသမီးအလှအပကိုသတိထားမိလာတယ်။ ထိုအခါငါရသည့်နှိုးဆော်သံသည်လိင်ကိုတွန်းအားမဟုတ်သည့်ရှုပ်ထွေးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ခြေဆစ်တစ်ဝိုက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘောင်းဘီနှင့်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်တွင်ထားရန်တိုက်တွန်းခြင်း။
10 မှာ 10 / 2012 / 1: 41 နံနက်
လိင်ရှိခြင်းအားလုံးသည်ကျော်တဖန်အပတ် 1-2 မှတဆင့် Going လိုပဲ Is
နောက်ခံသမိုင်း - ၃၀ နှစ်လယ်ပိုင်း၊ ၇ နှစ်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဇနီးသည်သည်အခြားမြို့ပြအလုပ်တစ်ခုတွင်နေထိုင်သောကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သာတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တွေ့ကြရသည်။ Sat. မှာကြီးမြတ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ နေ ငါဒီနေ့ပဲစိတ်ဆင်းရဲဖွယ်ချိုသာတဲ့။ တစ်နေ့ ၄-၅ မှာပြန်လာပြီလိုငါခံစားရတယ်။ ငါ orgasim w ၁ ပတ် ၁-၂ ပတ်သွားရင်ပိုပြီးလွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကကျွန်တော့်ကိုတွန်းအားပေးမှုတွေနဲ့ပြန်လည်သက်ရောက်စေတယ်။ ငါညည်းညူမနေသင့်သိတယ်။ SOs မရှိတဲ့ nofappers တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ခ / c နဲ့ခင်ဗျားကိုတကယ်ပဲစာနာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုဒီလောက်ဝေးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကဆိုးနေတုန်းပဲ။ ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးလွယ်ကူလာတာမတွေ့ရဘူး။
03 မှာ 15 / 2013 / 4: 37 ညနေ
ဒီကောင်လေးက porn blocker ကိုသုံးတယ်။
ငါမဆိုအော်ဂဇင်ပြီးနောက် Chaser ကွန်ပျူတာကိုဆင်းသော့ခတ်မထားဘူးဆိုပါကကျွန်မအလွန်လျှင်မြန်စွာ crash နှင့်မီးရှို့ကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါသည်ငါ့အလိုတော်ပါဝါအလုံအလောက်ခဲ့ကြသည်ဆန္ဒရှိပေမယ့်ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်. code ကိုရရန်အပိုလုပ်ရတဲ့များသောအားဖြင့်ငါ့လက်ျာဘက်စိတ်ကိုပြန်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
03 မှာ 27 / 2013 / 10: 27 ညနေ
Chaser မှတ်ချက်များ - လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ
ငါလိင်နှင့်မပါဘဲနှစ် ဦး စလုံး nofap အပေါ်အချို့သောအချိန် (တစ်ခုချင်းစီကို2လခန့်) ကိုပြု၏, ငါ NoFap ၏ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်, ဖြန့်ချိခြင်းမရှိဘဲ maintining ထက် WAAAYYY ခက်ခဲသည်ဖြန့်ချိပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါကြောင့်ရှည်လျားတဲ့ Streak ကိုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာ fapping ဖြစ်နေရင်တောင်နောက်တစ်နေ့မှာရှည်လျားတဲ့ Streak ကိုမစတင်ကြပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်စမ်းကြည့်ပါ၊ သင် nofap ဖြင့်အမြဲတမ်းချိုနေတတ်သည်၊ သို့သော်သွားပြီးလိင်ဆက်ဆံပါ၊ ထို့နောက်သင်မည်မျှချိုချိုသာနေသည်ကိုပြောပါ။
Nofap လိင်မရှိဘဲအကြှနျုပျအဘို့လမ်း eaiser ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါ။
သို့သော်သင်သည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပါက NoFap ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုယူဆခြင်းသည်မှားလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကပြောင်းပြန်သည်မှန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းအများကြီးပြောသောကြောင့်၎င်း, ကြောင်းကျိန်းသေငါ့အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့အညီ။ သင့် ဦး နှောက်က“ wow၊ orgasm ကပျော်စရာပါ။ ပိုပိုလုပ်ကြရအောင်!”
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုသော်လည်း ၃ လနီးပါးကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်။ အမှန်တကယ်ပုံမှန်တင်ထားရင်း fapping ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ ငါ NoFap ကိုအကြံပေးနေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေလာဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Hardon တစ်ခုဆက်ထားဖို့ပဲ။ PMO ကအဓိကအကြောင်းအရင်းပဲဆိုတာငါသိတယ်။ (ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Fapping သည်အထူးသဖြင့်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြုလုပ်သောအခါ)
ငါဟာအခု ၂ နှစ်ကျော်ကြာဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါဟာရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်မှာရှိခဲ့တယ်။ PMO ကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားစဉ်“ ကျန်းမာသော” လိင်ဆိုင်ရာဘဝရှိခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ သင်လိင်ကိုလုံးဝရှောင်ရှားနိုင်သည့်အချိန်တွင် PMO ကိုတားဆီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒါဟာတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့မင်းကအရက်သောက်တတ်တဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲနေတုန်းညစာအတွက်စပျစ်ရည်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်။
05 မှာ 18 / 2013 / 8: 17 ညနေ
အခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှ - အသက် ၃၀ ကျော်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို 'တစ်ပတ်ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ပဲ' လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့ကြောက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုငါမကြာခဏလုပ်ဖို့သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲ။ သငျသညျတဖနျ start သည့်အခါဒါဟာပြိုလဲခြင်းကဲ့သို့! http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1eknhc/married_in_a_relationship_over_30_fapping_too_much/ca16mgz